नायिका निरुता सिंहले सेयर गरिन,चलचित्र ‘आफन्त’का श्रीकृष्ण र शिव रेग्मी सँगको सुटिङका पूराना तस्विरहरु ! - समृद्ध नेपाल
श्रिमान बिदेश मा पसिना बगाउने घरको श्रिमती अर्कै नाठो सङ्ग मस्ति ल हेर्नुहोस पूरा भिडियो याहाँ 👇️
मेरो यौन चाहाना मेटाउने कोहि पुरुष हुनु हुन्छ भने भित्र आएर कमेन्ट गर्नु होला !
लब गर्ने कोहि ‘सिङगल’, ‘सोझो’, खालको ईमानदार केटा भयो आउनुहोस् इमो नम्बर दिन्छु…
मलाई जहिले पनि सुत्ने बेला मा धेरै चिलाउछ किन होला ?
म संग इमो मा बोल्ने मन छ भने मेरो फोटो लाइ छुएर तपाइको सम्पर्क नम्बर पठाउनु होला !
यस कारण आफु भन्दा बढी उमेरका पु*रुषसंग हुरुक्कै हुन्छन युवतीहरु पढ्नुहोस ।
म सँग बिहे गर्ने केटा चाहियो कोहि हुनुहुन्छ?😘
आजकल को बोका हरु संग नसके भए खाली कल मात्र गर्छ ! बोल्नु चाही खोज्दैन के भाको होला
नायिका निरुता सिंहले सेयर गरिन,चलचित्र ‘आफन्त’का श्रीकृष्ण र शिव रेग्मी सँगको सुटिङका पूराना तस्विरहरु !
निरुताको सिंहले सेयर गरिन,चलचित्र ‘आफन्त’का श्रीकृष्ण र शिव रेग्मी सँगको सुटिङका पूराना तस्विरहरुसन् १९९९ को चर्चित फिल्म थियो आफन्त । चलचित्रका निर्देशक शिव रेग्मी थिए भने अभिनेता अभिनेत्रीमा त्याे बेलाका हिट जोडी निरुता सिंह र श्रीकृष्ण श्रेष्ठ थिए । केशव भट्टराईले निर्माण गरेको यो
फिल्मले बक्सअफिसमा सुपरहिट प्रदर्शन गरेकाे थियाे । २२ वर्षपछि पनि यो फिल्म उत्तिकै कालजयी मानिन्छ ।यो वर्षसम्म नेपाली फिल्ममा धेरै उतारचढाव आयो । तर, आफन्तले धेरै मन जितेको छ । निरुताबाहेक श्रीकृष्ण शिव रेग्मी र केशव भट्टराईको नि-धन भैसकेको छ । अभिनेत्री निरुता अहिले फिल्म आफन्तलाई लिएर नोस्टाल्जिक छिन् ।
आफन्त छायांकन सेटका पुराना तस्विर सेयर गर्दै निरुताले ती मान्छे र क्षणलाई याद गरेकी छिन् ।यी पुरानो एल्बममा श्रीकृष्ण, शिव लगायतका अन्य प्राविधिकलाई पनि देख्न सकिन्छ ।निरुता लेख्छिन् हामी यो जीवनभरी माया अनि याद गरिरहनेछौं । तपाईंहरुको कमी सँधै भरी खट्किरहनेछ ।ज्या’न बचाउन ट्वाइलेटमा लुक्दा पनि ढोका फोडेर कुटे,२ तलाबाट हाम फाल्दा बचियो
भाइरल जोडी बखत र प्रतिभाको भयो सम्बन्ध बिच्छेद बखत रुदै मिडियामा आए !
‘छोरीभन्दा आमा तरुनी’ देखि ‘लुट्न सके लुट’ सम्म !
सानामा यस्ता थिए ‘दि भ्वाइस अफ नेपाल’ को चार जना कोचहरु !
घरबाट भागेर काठमाडौं छिरेकी अञ्जली अधिकारीले संघर्सका दिनको तस्बिर यसरी सार्बजनिक गरे ! तस्बिर सहित
उदयपुरमा भेटियो दिदि भाइ जस्तो देखिने श्रीमान श्रीमती जोडी भिडियो सहित !
अशोक दर्जीको नयाँ गीत आउँदै !
इन्डोनेसियाको केटीले नमस्ते भन्दै गाए नेपाली गीत !
सुजना ढकाल अभिनित गायक सुजनको “सुनकेशरी” सार्वजनिक !
यो बर्ष बलिउडमा डेब्यू गर्दैछन् यी नायिकाहरु !
आइएमइ लोक स्टार बिनोद दनुवारले लिएर आए “गाईघाट बजार”
पल र एलिशाको जोडीलाई दर्शकको साथ !
चलचित्रमा काम सुरु गर्दा मैले यौ’न उ’त्पी’ड’न’को सा’मना गरेको छु : प्रकृति श्रेष्ठ !
धेरै भ्युज पाउने यस्ता छन् ५ नेपाली गीत !